MSI Overseas Education Services Co.,Lt မှ ကျောင်းသား/သူ (၁၆)ယောက်ကို ပေးအပ်မည့် 100% Scholarship
Myanmar Search International Services Co.,Ltd Overseas Education မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (၁၀ တန်း) ဖြေဆိုပြီး ကျောင်းသား/သူ (၁၆)ယောက်ကို ပေးအပ်မည့် 100% Scholarship အစီအစဉ်
MSI နှင့် Partner Internation Universitiy (မိတ်ဖက် နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်) ဖြစ်သည့် Xiamen University Malaysia သည် ဘာသာစုံရမှတ် ပျှမ်းမျှရာခိုင်နှုန်း 80% နှင့် အထက်ရရှိသည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (၁၀ တန်း) ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး ကျောင်းသား/သူ (၁၆)ယောက်ကို 100% ပညာသင်ဆု (Full Scholarship) ပေးအပ်မည်ဖြစ်၍ MSI ရုံးခန်းတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး 2018 April တွင်တတ်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
International Hotel Management ဘာသာရပ်ကို Double Degree/ Double Major ဖြင့် သင်ယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေး
Asia-Pacific မှာ Top 1 Hotel School ဖြစ်သည့် သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS) နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Stamford University တို့မှ International Hotel Management ဘာသာရပ်ကို ပညာသင်ဆုများရယူရင်း Double Degree/ Double Major ဖြင့် တစ်ပြိုင်တည်းသင်ယူရရှိနိုင်။
သိန်း 80 ကျော် ၀န်းကျင်သာ ကုန်ကျမည့် သြစတြေးလျ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် Foundation တန်း
မြန်မာကျပ် သိန်း 80 ကျော် ၀န်းကျင်သာ ကုန်ကျမည့် သြစတြေးလျ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်အကြို Foundation တန်းကို ပညာသင်ဆုဖြင့် MSI Overseas Education တွင်စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^
ဘယ်လိုလူတွေ တက်ရောက်သင့်သလဲ ?
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်ကြီးများအသိအမှတ်ပြု SAM program သည် ကျောင်းသား/သူ လူငယ်များအား မှီခိုမှုကင်းသော ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သော ၊ မိမိလုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အလေးအနက်ထားပြီး တစိုက်မက်မက် ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိသော ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးများသို့ တက်ရောက်သင်ကြားလိုသော သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု program တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် အောင်လက်မှတ်နှင့် အကျိုးကျေးဇူး
ငှင်း Australia တက္ကသိုလ်အကြို Foundation တန်း (Pre-University) program ကို Malaysia နိုင်ငံ Taylor’s University ၏ Lakeside Campus တွင် တက်ရောက်သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပြီးဆုံးအောင်မြင်ပါက South Australian Certificate of Education (SACE) Education မှ Certificate ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည် ။ SAM Pre-University တွင် Course work (70%) နှင့် Examination (30%) ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းသား/သူ လူငယ်များအတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ဘွဲ့ဒီဂရီတန်း တက်ရောက်ပညာသင်ကြားသူများအတွက် အခက်အခဲလုံးဝမရှ်ိ အရည်အချင်းပြည့်မှီစွာ သင်ကြားနိုင်မည်မှာ ဧကန်မလွဲဖြစ်သည် ။
ဆေးပညာရပ်ကို အထူးပြုသင်ကြားနေသော Aimst University
Myanmar Search International (MSI) နိုင်ငံခြားပညာရေးဝန်ဆောင်မှု သည် မလေးရှားနိုင်ငံရှိဆေးပညာရပ်ကို အထူးပြုသင်ကြားနေသော Aimst University နှင့် တရားဝင်ပူးပေါင်းရ်ျ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း (30) ကျော်သာ ကုန်ကျမည့် ဆေးပညာဘာသာရပ်၏ အခြေခံအတန်းဖြစ်သော Foundationတန်းကို 2018 March Intake အတွက် MSI တွင် စတင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
Myanmar Search International (MSI) Overseas Education ၏ 100% ပညာသင်ဆု
Webster University Thailand Campus (U.S.A.) မှပေးအပ်သည့် 100% ပညာသင်ဆုကို Myanmar Search International (MSI) Overseas Education မှ IGCSE ကျောင်းသူတစ်ဦးကှို ထပ်မံမွေးထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
Myanmar Search International ( MSI ) နိုင်ငံခြားပညာရေး ဝန်ဆောင်မှုမှ စေတနာမေတ္တာဖြင့် အခမဲ့ တာဝန်ယူလျှောက်ထားပေးခဲ့သောကျောင်းသားများစွာထဲမှ Webster University Thailand Campus ( U.S.A. ) ၏ ၁၀၀% ပညာသင်ဆုကို 2017 August ကျောင်းဖွင့်ချိန်( Fall 1) အတွက် PISM ( International School ) မှ IGCSE ကျောင်းသူ
Ms. Michelle Lim @ Kyi Phyu Maung Maung က ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်မံရရှိသွားပါသည်။
ယခုလAugust ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် 100% ပညာသင်ဆုရရှိရန်အတွက်လျှောက်ထားပြီး မရရှိပဲကျန်ရှိနေသော ကျောင်းသား/သူများအတွက်
ကမ္ဘာ့အဆင့်အရည်အသွေးမီအမေရိကန်ပညာရေးကို ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာ သင်ယူလိုသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအားလုံးကို MSI နိုင်ငံခြားပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှ 2018 ခုနှစ် January Intake အတွက် ကျန်ရှိသော 100% ပညာသင်ဆုကို စတင်လျှောက်ထားရယူနိုင်ဖို့ယခုချိန်မှ စတင်၍ စာရင်းပေးသွင်း နိုင်ပါပြီ ။
MSI ရုံးခန်းလိပ်စာ အမှတ်(၂၃၄)၊ ဒုတိယထပ်၊ ရွှေဘုံသာ (အလယ်)လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊
09-5103915 , 09-420037616, 09-402517549 , 09-43188691, 09-423700909
ထိုင်းနိုင်ငံရှိအမေရိကန် Webster တက္ကသိုလ် ကျောင်းခွဲမှ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ပင်မ တက္ကသိုလ် Webster သို့ ကူးပြောင်းသင်ယူစဉ် ကြုံတွေ့ရသော အမေရိကန် ဗီဇာ လျှောက် ထားပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် အမေရိကန် ပညာသင်ဆုများ အကြောင်း၊ လေယာဉ် လက်မှတ် “အခမဲ့” အစီအစဉ် များကိုယခုလက် ရှိပညာသင်ယူနေသော အမေရိကန် ပညာသင်ဆု 50% ရ မောင်ဘုန်းမြတ်ခိုင် နှင့် MSI နိုင်ငံခြားပညာရေးဝန်ဆောင်မှု တို့၏အမေရိကန် ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲ
ရန်ကုန်မြို့ Sule Shangri-La Hotel ပင်းယခန်းမတွင်
(၂၀၁၇)ခုနှစ် ၊သြဂုတ်လ(၁၂)ရက် ၊စနေနေ့
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျောင်းသား/သူများအတွက် ထူးခြားဆန်းသစ်သော ဘာသာရပ်တစ်ခု
ရေပေါ်ရေအောက် သက်ရှိသက်မဲ့ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ထိုသယံဇာတများ ပျက်စီးပြုန်းတီးမှုမရှိစေရန်၊ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းစသည့် ပညာရပ်များ ပါဝင်သည့် Marine Biotechnology ဘာသာရပ်ကို Xiamen University Malaysia (XMUM) ၏
* September လ* ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင်တတ်ရောက်
“ မလေးရှား” ပညာရေးလမ်းကြောင်းကို ဘာလို့ရွေးချယ်သင့်လဲ?
“မလေးရှား” ပညာရေးစနစ်သည် နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးမှီ Graduate Resource Personal ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အဓိက အခြေခံထားပြီး သင်ကြားပေးနေသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုသင်ယူနိုင်ခြင်း။
“မလေးရှား” နိုင်ငံတွင် (၁)နှစ် (သို့မဟုတ်) (၂)နှစ် ဦးစွာ ပညာသင်ယူပြီးကျန်ရှိသော ပညာသင်နှစ်များကို UK, USA, Austarlia, Canada နှင့် Switzerland စတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာ သွားရောက်သင်ယူနိုင်ခြင်း။
“မလေးရှား” နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များတွင် ပညာဆက်လက်သင်ယူပြီး ထိုကျောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောနိုင်ငံကြီးများရှိ “Partnership University” များမှ ဘွဲ့ Degree များရယူနိုင်ခြင်းကြောင့် (2 နိုင်ငံ) အတွေ့အကြုံပါပိုမိုရရှိစေခြင်း။
အခြားနိုင်ငံများထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ထိုနိုင်ငံများနည်းတူ နိုင်ငံတကာဘွဲ့လက်မှတ်များကို ကျောင်းစရိတ် သက်သာစွာဖြင့်သင်ယူနိုင်ခြင်း။
ကျောင်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ကျောင်းသား Visa နဲ့ နေထိုင်ရသည်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေခြင်း။
ထို့အပြင်ကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများမှ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် (AIA Health Insurance Card) ကို အခမဲ့ ပေးထားသောကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ပိုပြီး လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်လည်းသွားလာရ လွယ်ကူသဖြင့် မိဘနဲ့သားသမီး အချိန်မရွေးတွေ့နိုင်ခြင်း။
စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်သောကြောင့် “မလေးရှား” နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များသို့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုပါက Myanmar Search International (MSI) Oversea Education Company သို့လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
MSI Office -- အမှတ်(၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ် (ညာ) ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(အလယ်) ၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့။
September လကျောင်းဖွင့်ချိန် Certificate အတန်းများအတွက် စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ(၅၀၀) ပေးအပ်မည့်အခွင့်အရေး
MSI မှ PSB Academy ၏ September လကျောင်းဖွင့်ချိန် Certificate အတန်းများအတွက် စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ(၅၀၀) ပေးအပ်မည့်အခွင့်အရေး
TMC Academyကျောင်း ၀င်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များကို MSI Office တွင် တစ်ဦးချင်း အသေးစိတ် ဆွေးနွေးပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှကိုးတန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ နှင့် International ကျောင်းများမှ Year (10) စင်ကာပူ နိုင်ငံရှိ TMC Academy မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် ကိုယ်တိုင်ကျောင်း ၀င်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များကို MSI Office တွင် တစ်ဦးချင်း အသေးစိတ် ဆွေးနွေးပွဲ